Mariela Carril | | omenala, Egypt
N'Africa bụ - Ijipt, ala nke aha ya na -akpọte ngwa ngwa nnukwu pyramid dị omimi, ili oge ochie na ndị Fero nke e liri akụ. Ekwenyere m na ọ nweghị onye ga -atụfu Egypt, opekata mpe otu oge na ndụ gị, ị ga -aga hụ, metụ ma nwee mmetụta ihe obodo a mara mma ga -enye n'akụkọ ihe mere eme nke mmepeanya anyị.
Ma kedu ka omenala Egypt dị taa? Kedu maka ndị njem, kedụ maka ụmụnwaanyị, ihe a na -ahụ nke ọma ka ọ na -eme na ihe na -abụghị? Nke ahụ bụ ihe akụkọ anyị gbasara taa.
2 Omenala nke Egypt
Bụ na Africa na Asia, n'agbanyeghị na tumadi na kọntinenti mbụ. Ọzara Sahara a ma ama nwere akụkụ buru ibu nke ókèala ya, mana ọ bụ Osimiri Naịl nke na -eme ndagwurugwu na delta, ruo mgbe ọ na -asọba n'oké osimiri Mediterenian, na -emepụta ala na -eme nri, ndị mmadụ bi na ya, ruo ọtụtụ puku afọ.
Otu n'ime ebe mmepeanya Ọdịda Anyanwụ, Egypt oge ochie dị oke mkpa maka ụdị anyị na taa, foduru nke mmepeanya a dị ịtụnanya ka na -achọ elu ya mma wee bụrụ ndọta ndị njem.
Ihu igwe nke Egypt bụ mpaghara mmiri, na oge ọkọchị na -ekpo ọkụ, ọkọchị na obere oyi. N’ezie, oge oyi bụ oge kacha mma iji gaa nlegharị anya n’Ijipt n’egbughị ọkụ n’ọkụ.
Egypt bụ a obodo mepere emepe ebe omenala dị iche iche na -agbakọta. N'ime mba Arab ọ bụ na -emepe emepe ma na -emesapụ aka, ọkachasị n'ịgwọ ma ọ bụ ịtụle ndị mba ọzọ bịara ileta ha. Enwere okwu ụfọdụ ekwesịrị iburu n'uche: ịdị umeala n'obi, mpako, obodo, iguzosi ike n'ihe, agụmakwụkwọ na nsọpụrụ. Otu ndị Egypt dị n'otu, yana ihe karịrị 99% agbụrụ dị n'otu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile bụ ndị Alakụba, ndị obodo Sunni, na Alakụba bụ akara enweghị atụ.
Oha obodo Egypt bụ stratified ma dabere na ebe ndị mmadụ bi n'ime ya a na -enweta ọgwụgwọ dị iche iche. Ya mere, ịmara ebe ahụ dị mkpa. Ọ bụrụ na onye ahụ gụrụ akwụkwọ na mahadum ọ bara ezigbo uru, nke ukwuu na mahadum ọ mere ya. Ezinaụlọ na -etinye nnukwu ego na agụmakwụkwọ ụmụ ha n'ihi na ọ bụ ngwa ọrụ na -agagharị agagharị.
Ọ dị mma ugbu a N'ikwu maka ezinụlọ, ndị Ijipt na -etinye nnukwu ihe dị n'ime. Ezinaụlọ ga na -akpa agwa dị ka onye kwesiri nsọpụrụ ka a kwanyere ya ugwu, ọ bụ ya mere ụmụ nwoke na -eji echebe ụmụ nwanyị ruo mgbe ha lụrụ. Enwere ndị mmadụ karịa ndị ọzọ, ma ọ bụ ndị na -erube isi na mgbakọ okpukpe, yabụ ị ga -ahụ ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ agbọghọ nwere ịchafụ na ndị ọzọ kpuchiri ekpuchi.
Egypt na -ekwu na ya bụ a obodo dị mma maka ụmụ nwanyị Ọ bụkwa eziokwu na e nwere otu ndị njem nlegharị anya ụmụ nwanyị na -ahọrọ ịga mba a na enweghị nsogbu. N'ụzọ doro anya, ịkwanyere omenala na akparamagwa uwe ugwu. Naanị ihe ị ga -atụle abụghị ịgagharị na nnọkọ oriri na ọ becauseụ becauseụ n'ihi na ụfọdụ ụlọ na ebe nwere ike mechie, ma ọ bụghị ị nwere ike. Nchọpụta: ụmụ nwoke na -ele anya nke ọma na ụmụ nwanyị ala ọzọ, ọ bụrụgodi na di ha, enyi nwoke ma ọ bụ enyi ha so ha. Ọ bụ nnọọ iru ala.
Azụmaahịa na ndụ n'ozuzu00 na -eji ya Kalenda Gregory, mana enwere kalenda ndị ọzọ echebara echiche. Dịka ọmụmaatụ, ya kalenda islam nke dabere na ịhụ ụfọdụ usoro okpukpe na kalenda ọnwa nke ọnwa iri na abụọ na ụbọchị iri abụọ na itoolu ruo ụbọchị iri atọ. Otu afọ ndị Alakụba nwere ụbọchị 12 na -erughị afọ Gregorian.
Kalenda ọzọ ejiri na Egypt bụ ndị Copt ma ọ bụ Kalenda nke Alexandria. Nke a na -akwanyere okirikiri anyanwụ nke ọnwa 12 nwere ụbọchị 30 ọ bụla na ọnwa nke naanị ụbọchị 5. Kwa afọ anọ, a na -agbakwunye ụbọchị nke isii n'ime ọnwa ahụ dị mkpụmkpụ.
Dabere na Jehova moda Ị ga -ahụ ụdịdị dị iche iche metụtara gburugburu ebe obibi na omenala na -achị na mba a. N'aka nke ọzọ, e nwere ụdị ndị Bedouin, nke a na -anọchite anya ya na oke osimiri Saịnaị na Siwa, nwere akwa mara mma na akwa mara mma, eriri, brocade na masks nwere ọtụtụ ọla ọcha na ọla edo. Enwekwara ụdị Nubian, nke a na-ahụkarị n'ime obodo Nubian n'akụkụ ndịda osimiri Naịl: agba, ihe mkpuchi ... O doro anya, a na-ete ihe niile na ejiji Western nke dị na T-shirts, uwe ogologo ọkpa, akpụkpọ ụkwụ, ụdị mba ụwa. .
Gịnị ka anyị kwesịrị ime n'Ijipt? Ị ga -eji ejiji dị mma ma mara ka ị ga -esi gosi onwe gị onye nke ọzọ, yana onyinye agụnyere ma ọ bụrụ na nzukọ a na -eme nke ọma, ndị na -eto eto ga -enwerịrị nkwanye ùgwù n'ebe ndị agadi nọ, anyị enweghị ike ịga n'ihu onye na -ekpe ekpere (nke a metụtara ma ọ bụrụ na ị bụ ndị Alakụba, mana ọ dị mma ịmara ma tinye ya n'ọrụ), ị gaghị anọ ogologo oge na -eme nleta, anyị nwere ike ghara ịbịa n'oge ...
N'ezie Ọ bụghị otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na otu nwanyị bụ nwoke ma ọ bụ nwoke. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke wee zute onye Ijipt na nke mbụ, ikwe aka kwekọrọ, n'aka nri. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị wee kelee nwanyị na nke mbụ ya, ọ ga -ezuru ịkpọtụ isi gị ntakịrị ma ọ bụ ịgbanye obere aka n'aka. Ọ bụrụ na ekele na -agwakọta, mgbe ụfọdụ ikwe aka na -aba uru, n'agbanyeghị na nwanyị kwesịrị ịbụ onye buru ụzọ setịpụ aka ya ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ma ọ bụrụ na ọ meghị ya, ọ na -efufe isi.
Dị ka anyị na-ahụ, nkwukọrịta gestural dị mkpa. Ndị Ijipt na -ekwu okwu nke ọma ma na -enwekwa mmasị na mkparịta ụka, yabụ ị ga -ahụ mgbe niile mmegharị ahụ dị mma. A na -egosipụta ọńụ, ekele, na iru uju n'ihu ọha, mana iwe dị obere n'ihi na a na -akọwahie ya nke ọma dị ka mkparị. Ọ dị ka ha ziri ezi mana ọ bụghị otu a, dịka ọdịbendị ndị ọzọ na -ebute ụzọ n'ọchịchọ ha abụghị ihe a na -ahụkarị. Ndị Ijipt zere ịjụ ee e ozugbo yabụ ha na -ewe ogologo oge, dịka ndị Japan.
N'ihe gbasara imetụ aka aka, ihe niile dabere n'ọkwa mmekọrịta ndị mmadụ nwere. Dị ka ndị njem, anyị agaghị eru ebe ahụ, belụsọ na anyị nwere ndị enyi ma ọ bụ soro ndị obodo na -arụkọ ọrụ, mana ka anyị kwuo na iwu edeghị ede nke kọntaktị anụ ahụ dabere na ogo ịmara na okike, doro anya. Ogologo ogwe aka dị ka oghere onwe onye bụ ihe a ga -atụle.
Ntụle ikpeazụ: ọ bụrụ na akpọrọ gị ka ị bịa n'ụlọ ndị Ijipt rie nri, weta onyinye, chọkọletị dị oke ọnụ, ihe ụtọ ma ọ bụ achịcha, ọ dịghị okooko osisi n'ihi na echekwara ha maka agbamakwụkwọ na ndị ọrịa; Ọ bụrụ na enwere ụmụaka, a na -anabatakwa onyinye enyere ha nke ọma, mana ihe niile ị na -enye, cheta nke ọma, ị ga -eji aka nri ma ọ bụ aka abụọ nye ya. Atụkwala anya na a ga -emepe onyinye ozugbo enwetara ha.
N'ụzọ bụ isi, echefula na Egypt bụ obodo ndị Alakụba nke ị ga na -akwanyere omenala ndị na -abụghị nke anyị ùgwù. Anyị agaghị echefu ajụjụ a: anyị anọghị n'ụlọ, anyị ga -enwerịrị nkwanye ùgwù. Site na ahụmịhe, ịbụ nwanyị abụghị ihe kachasị nwee ntụsara ahụ n'Ijipt, ịga ije n'okporo ụzọ Cairo nwere ike na -akpasu gị iwe n'ihi na ha na -ele gị anya nke ukwuu. Ọ medịrị m ka mụ na di m soro na -aga ma gwa m ihe, n'agbanyeghị ọnụnọ ha. Obere ntutu m? Ọ nwere ike, n'ihi na ọ yi ogologo ogologo ọkpa na uwe elu, ọ nweghị ihe na -egbu maramara.
Mana ihe m chọrọ ikwu bụ na n'agbanyeghị na Egypt bụ mba na -emesapụ aka karịa mba ndị Alakụba ndị ọzọ, ọ bụghị na oke ọzọ. Site n'inwe ndidi, nkwanye ugwu na ndidi, eziokwu bụ na ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ịtụnanya niile nke akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke nnukwu obodo a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Omenala nke Egypt